जनार्दन शर्मालाई प्रश्न - माओवादीले... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
जनार्दन शर्मालाई प्रश्न - माओवादीले एमालेलाई धोका दिन लागेको हो?
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अहिले मन्त्री छन्। तर, उनीसँग कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी छैन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलका लागि शर्माले सक्रिय भूमिका खेलका थिए। अहिले पनि उनी पार्टी एकता प्रक्रियालाई स्वरूप दिन सक्रिय छन्।
प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि अझै समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम आईसकेको छैन। त्यसैले अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकि छ। राष्ट्रिय सभा विधेयकमा दलहरूबीचको असमझदारीले राष्ट्रिय सभा अध्यादेश आउन सकेको छैन। सरकार निर्माण, दुई पार्टी एकता र राष्ट्रिय सभाको ‘डेडलक’बारे सेतोपाटीले शर्मालाई दश प्रश्न सोधेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर सरकार कस्तो बन्छ भन्ने अझै निर्क्यौल हुन सकेको छैन, किन?
सरकार गठनका लागि पहिला त चुनावको रिजल्ट आउनुपर्‍यो। रिजल्ट नै आएको छैन। अब निर्वाचन आयोगले किन रोक्यो ? यो उसले जान्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको टुङ्गो नलाग्दा ‘डेडलक’ सिर्जना भएको हैन र?
म गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सभाको जुन विधेयक अगाडि बढाएको थिएँ, त्यो पछि रोकियो। अहिले अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। अब एकल संक्रमणीयबाट तोकिएका मान्छे छान्ने कसरी हो? संविधानले त फलानो ल्याउनु फलानो ल्याउनु भनेको छ। तीन महिलामा एउटा दलित भनेको छ, एकल संक्रमणीयबाट कसरी ल्याउने? प्राविधिक समस्या छ। तोकिएको व्यक्ति पनि ल्याउनुपर्ने अनि विधि पनि आफू अनुकुल बनाउन पर्ने, समस्या यहाँ हो।
सुरूवातमा यो विधेयकमा तीन दलबीच छलफल हुँदा कांग्रेसले रोकेको हो। अहिले कांग्रेसले एक्लै, बिना सहमति अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा लग्यो। अध्यादेश लैजानु पूर्व न्यूनतम सहमति त गर्नपर्थ्यो नि कांग्रेसले। त्यो नगर्दा समस्या भयो। तर अब नअड्काउँ, छिट्टै समाधान खोजौं भन्ने हाम्रो धारणा छ।
तपाईँ त दुई पार्टीको तालमेल र एकता पक्रिया अगाडि बढाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अहिले त एकता हुनेमा संशय देखापर्‍यो नि!
पार्टी एकताबारे कुनै संशय छैन। बाहिर बाहिर विभिन्न टिप्पणी आएका छन्। अन्तर्वाता हेर्दै प्रचार गर्दा समस्या भइराखेको छ। त्यो सत्य होइन।
तपाईँको पार्टीले सरकार निर्माण अघि एकताको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेको हैन र?
सरकारभन्दा पहिला एकता प्रक्रिया टुङ्गिदैँन। एकता कसरी गर्ने भन्ने सामान्य खाका तयार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो।
सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्व टुङग्याएर जाउँ भन्ने हो?
एकता भनेको नेतृत्वको मात्र कुरा होइन। यहाँ दुई राजनीतिक, वैचारिक धारालाई एकता गर्ने कुरा छन्। संगठनका कुरा छन्। नेतृत्वको कुरा छ। दुई कमिटी मिसाउने मात्र कुरा होइन। एकताको विषयमा छलफल भइराखेको छ। सकारात्मक छलफल चलेको छ। नेतृत्वको विषयमा पनि कुरा चलेको छ।
दुई पार्टीको सहमति भनेको हाम्रो वाम गठबन्धन एकतालाई जनताले अनुमोदन गरिसके अब अनुमोदन गरेको विषय कतै तल माथि छैन।
टुङ्गो कहिले लाग्छ त?
छलफल हुदैँछ। एकता प्रक्रिया आजको आजै टुङ्गिदैन। मुल खाका तयार गर्ने विषयमा नेतृत्व र टिममा छलफल भैराखेको छ। त्यसले छिट्टै परिणाम दिन्छ।
माओवादी भित्र एकता पछि हामी सकिने पो हो कि भन्ने संशय छ देखिन्छ। अझ तपाईँ र वर्षमान पुनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न गर्दा समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ नि?
माओवादीलाई संशय छैन। हाम्रो भविष्य केही हुँदैन। भविष्य देशको हो। व्यक्ति विशेषको, मेरो भविष्य के भन्ने प्रश्न होइन। देशलाई राजनीतिक स्थायीत्व चाहिएको छ। समृद्धि चाहिएको छ। त्यसका लागि दुई पार्टी एकता गर्ने हो। दुई तिहाई जनमत रहेको वामपन्थी एकता गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने विषय मुख्य कुरा हो। व्यक्तिगत रुपमा हाम्रो भविष्यबारे माओवादी कोही पनि चिन्तित छैनौँ।
सरकार निर्माणका लागि प्रचण्डलाई कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ। प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ?
जसले जे प्रस्ताव गरे पनि कमरेड प्रचण्डले वामगठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ। हिजो पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रचण्डले राजीनामा दिन लाग्नु भएको थियो। एमालेले समर्थन गर्छु प्रधानमन्त्री भैराख्नुस् भनेको थियो। तर प्रचण्डले त्यो अनैतिक हुन्छ म गर्दिन भन्नुभयो।
आज पनि कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दा यो कुरा अनैतिक हुन्छ। हामी वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढेका छौं। जनताले दिएको जनमत अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसक्नु भएको प्रचण्डले। त्यसैले कांग्रेसको प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना छैन।
एमाले भित्र कतै माओवादीले धोका दिने हो कि भन्ने संशय देखिन्छ नि?
जनता र कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेको कुरामा जसले धोका दिन्छ त्यो समाप्त हुन्छ। धोका दिन सम्भव छैन। हामी पनि एमालेले धोका दिन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन। जनताले अनुमोदन गरेको यो अवस्थामा कसले, कसरी धोका दिनसक्छ!
माओवादी नेतृत्वमा एमालेले कतै फोरमसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका देखियो नि?
कुनै पात्र विशेषले के सोच्यो, को सँग के कुरा गर्‍यो त्यसको केही अर्थ छैन। (शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओली र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच कुरा भएको थियो।)
हामीले दुई पार्टीबीच संस्थागत कुरा गरेका छौँ। नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। नेतृत्व सकरात्मक छ। कुनै ठाउँमा कसैले कसैलाई भेटेर त्यसको समाचार बनाएर अर्थ छैन। अर्थ दुई पार्टीको संस्थागत निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो। दुई पार्टी संस्थागत रुपमा एकताका लागि तयार छन्। नेतृत्व पनि तयार छन् भनेपछि यसमा कुनै बाधा अड्चन छैन।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ११, २०७४, ११:०४:३१